“Mohamed Salah hadii uu doonayo inuu la mid noqdo Ronaldo iyo Messi waa inuu kula guuleystaa Liverpool Champions League” – Gool FM
(Champions League) 25 Maajo 2018. Ryan Giggs ayaa sheegay in Mohamed Salah uu guul gaarsiin karo Liverpool kulanka finalka Champions League ay kula ciyaari doonaan kooxda Real Madrid ee lagu ciyaari doono dalka Ukraine ee caasimadiisa Kiev.
Xidigii hore kooxda Man United ayaa sheegay in Mohamed Salah ay muhiim u tahay ku guuleysiga Champions League, si uu ula mid noqdo xidigaha xidigaha Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi.
“Salah wuxuu sameeyay xili ciyaareedkan qaab ciyaareed cajiib ah, laakiin waxa jirta laba xidig ee sidaan soo sameesay mudo 10 sano, waxayna soo dhaliyeen goolal muhiim ah iyo qaab ciyaareed cajiib ah”
“Laakiin suuragal ma noqoneyso in Mohmed Salah layska indho tiro, in xili ciyaareedkan uu u ahaa mid aad ugu weyn isaga, isla markaana uu soo bandhigay qaab ciyaareed aad u wanaagsan, wuxuuna go’aamiyay kulamo badan”.
“Ronaldo iyo Messi, waxay farqi sameeyeen kulamo badan, sida kulamada finalka ee Champions League”.
“Si aad u noqoto ciyaaryahan aad u weyn, waa inaad sidaas oo kale aad sameyso, waa inaad ku guuleysataa koobab weyn, sida Champions League oo kale”.
HORDHAC: Real Madrid vs Liverpool, Cayaarta Finalka Champions League